गीर्वाणीको आसु – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०६९ पुष १८ गते ३:१० मा प्रकाशित
काठमाडौं, १८ पुस । नारायणहिटी दरबारभित्र नरसंहार हुँदा उनी मात्र तीन वर्षकी थिइन् । सायद आफ्नी आमाको धमिलो छवि मात्र उनको मानसपटलमा छ ।
१४ वर्षीया गीर्वाणी शाह आमाको त्यही धमिलो छवि मन मस्तिष्कमा लिएर गत शनिबार नेपाल आर्ट काउन्सिल पुगिन् । काउन्सिलमा आयोजित पूर्वराजपरिवारको तस्बिर प्रदर्शनी हेर्न बाबु गोरखशमशेरसित गएकी उनले सबै तस्बिरहरू हेर्न भने सकिनन् । आमाको तस्बिर हेर्दाहेर्दै भक्कानिएर रोइन् ।
तत्कालीन शाही चिकित्सक डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले ‘स्वर्गीय श्री ५ वीरेन्द्रको सम्झना मेरा तस्बिरहरूमा’ शीर्षकमा आफूले खिचेका राजपरिवारका तस्बिर प्रदर्शनीमा राखेका थिए । गत पुस १२ गतेदेखि आयोजित प्रदर्शनी हेर्न गीर्वाणी आफ्ना बाबुका साथ पुस १३ गते पुगेकी थिइन् ।
आफ्ना मावली परिवारका फोटो हेर्दै जाँदा भावुक हुन पुगेकी गीर्वाणी आमा श्रुतिको फोटो देख्नेबित्तिकै भक्कानिएर रोएको प्रदर्शनीकी संयोजक राज्यलक्ष्मी शाक्यले बताइन् । गीर्वाणी रोइरहँदा उनका बाबु गोरखशमशेरले पनि आँसु थाम्न सकेका थिएनन् । ‘त्यतिबेला प्रदर्शनी हेर्न आएका अन्य दर्शक पनि भावुक बने,’ शाक्यले सौर्यसँग भनिन् ।
श्रुतिका श्रीमान् गोरख र छोरी गीर्वाणी ४५ मिनेटजति प्रदर्शनीमा बसेका थिए । फोटोहरू हेर्दाहेर्दै भक्कानिएकाले उनीहरूले सबै फोटो हेर्न सकेनन् । उनीहरूले ती फोटो हेरिसकेर हरेक वर्ष प्रदर्शनीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको कार्यक्रम संयोजक शाक्यले बताइन् । फोटो प्रदर्शनीमा पूर्वराजपरिवारका अन्य केही सदस्य प्नि आएका थिए ।
डा. खगेन्द्र स्पोर्ट फाउन्डेसनले आयोजना गरेको प्रदर्शनीमा पूर्वराजा वीरेन्द्रको बाल्यकाल हुँदै विवाह, व्रतबन्ध तथा देशविदेशमा गरेका भ्रमणदेखि देहावसानका समेत दुई सयभन्दा बढी फोटोहरू राखिएका थिए । पाँच दिनसम्म चलेको प्रदर्शनी सोमबार समापन भएको थियो । २०२२ सालदेखि संकलन गरेका फोटोहरू प्रदर्शनीमा राखेको र जसमध्ये १३ फोटो अरूबाट लिइएको श्रेष्ठले बताए । आयोजकका अनुसार करिब ५० हजार दर्शकले प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए ।
यो मन मेरो कैले बुझ्ने हो
आफ्नी आमाको तस्बिर हेरेर गीर्वाणीले आँसु खसालेको फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अत्यधिक चर्चित बनेको छ । अनीललाल श्रेष्ठले सबैभन्दा पहिले पोस्ट गरेको यो तस्बिरलाई सयौँले सेयर गरेका छन् । तस्बिरमा राखिएको केही घतलाग्दा प्रतिक्रियाहरू यहाँ प्रस्तुत छन् :
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रसम्बन्धी एउटा फोटो प्रदर्शनी अवलोकन गर्दै रोइरहेकी श्रुतिपुत्री गीर्वाणीको फोटो आज देखेँ । मन उत्पात अमिलो भो । उनको अनुहारमा मैले वीरेन्द्र र श्रुतिको आभा देखेँ । तिम्रो जय होस्, नानी ††††
शब्दचित्र डट कम
आशा गरौँ, तिमीले एक दिन ठोस सत्य थाहा पाउनेछौ र हामीले पनि । तिमी साहसी केटी हौँ, जो ठूलो वियोग बोकेर बाँचिरहेकी छौँ । भगवान्ले तिमीलाई सधैँ आशीर्वाद दिऊन् ।
तिम्रो सधैँ भलो होस्, नानी ††††
मेरी भान्जी, तिमीलाई पशुपतिनाथले आशीर्वाद दिऊन् ।
बिचरा † यी नानीको दु:खको आँसुले दुस्मनको सधैँ मुटु पोलोस् ।
उनी कति सुन्दर र निर्दोष छिन् † हाम्रा प्यारा राजासित धरै नै अनुहार मिल्छ । प्यारा राजा श्रद्धाञ्जली †
नानी † तिमी अब ठूलो भएर तिम्रो मावली र ममीलगायत त्यो हत्याकाण्डका हत्याराहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनेछौ । हामी जनता तिम्रो साथमा छौँ ।
यो आँसुले हत्यारालाई अवश्य पोल्नेछ
विधाताको लेखा कहिल्यै पनि टारेर टर्दैन । जे लेखेको छ त्यो अवश्य भोग्नुपर्छ । संघर्ष नै वास्तविक जीवन हो ।
के सोचिरहेकी हौली ? नानी तिमी, तिम्रो पूरै वंशको फोटो हेर्दा । के भन्दै होला तिम्रो त्यो कोमल मन, त्यो पूरै इतिहास हेर्दा । कुन बैरीले चुड्यो त्यो तिम्रो संसार । कुन तालले सार्‍यो तिम्रो पाइला । यो आँसुले सराप्नेछ, त्यो इतिहासलाई जसले रच्यो यो घटना ।
फार वेस्टर्न देवकी विष्ट
यो फोटो देखेर आज म रुन मात्र सकिनँ